Change the mix of ou - Anglais - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: change the mix of our business (Anglais - Birman)
ရုပ်ပုံ အကြောင်းအရာရဲ့ အရွယ်ကို ပြောင်းလဲပါ
အလွှာရဲ့ အကြောင်းအရာ အရွယ်ကို ပြောင်းလဲပါ
Change the login screen configuration
Do not change the ionizer direction
ဤခေါင်းစဉ်ကို သင် မပြောင်းလဲနိုင်ပါ
So they want to change the Malaysian flag too.
သီချင်းက ​ဟောင်း​တဲ့​အထဲ ပါ​နေ​ပြီ​လေ။
ညဉ့်သည် ငါ၌ နေကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ ငါ့အလင်းသည် မှောင်မိုက်နှင့် နီးစပ်၏။
Authentication is required to change the login screen configuration
Changes the case of selected text.
ရွေးချယ်ထားသော စာသားကို အကြီးအသေးပြောင်း
ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်၏ ကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူ ရှိပါစေသတည်း။ အာမင်။
ငါတို့ ဗိမာန်တိုင်တို့သည် အာရဇ်ပင်၊ အမိုးသည် ထင်ရူးပင်ဖြင့်ပြီးသတည်း။
If they change the flag, why not change the National Anthem as well?
သူ​တို့​တွေ နိုင်​ငံတော်​သီချင်း အသစ်​ကို​ရေး​ထုတ်ပေး​ဖို့ namewee ကို​တောင် ခေါ်​ချင်ခေါ်​နိုင်​တယ်။
ငါတို့ချစ်သောဗာနဗ၊ ပေါလုတို့နှင့်တကွ ရွေးကောက်သော သူ တို့ကို သင်တို့ဆီသို့စေလွှတ်ခြင်းငှါ တညီတညွတ်တည်း စီရင်သည်နှင့် အညီ၊
Changes the highlight mode of the active document
ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့သခင်ယေရှု၏ ကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့၏စိတ်နှလုံး၌ ရှိစေသတည်း။ အာမင်။
အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသော အကြောင်းကြောင့်၊ ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော တအိမ်ထောင်လုံး တည်းဟူသော သားတော်အပေါင်းတို့၏ အချုပ်အခြာဖြစ်တော်မူသော၊
متأملا (Arabe>Albanais)Солодовый (Russe>Anglais)tum kab gaye (Hindi>Anglais)4,292 (Anglais>Espagnol)quem ad finem sese effrenata iactabit audacia (Latin>Français)concitatus (Latin>Thaï)polemic (Anglais>Grec)xx bf bangla full mp4 video (Bengali>Anglais)nous rencontrons des probl�mes avec (Français>Anglais)الجُمجمة (Arabe>Italien)volledig in strijd zijn met (Néerlandais>Anglais)wanted to know that his ir pack is active or not (Anglais>Hindi)hydroxyethylamines (Français>Anglais)unabbronzatura (Italien>Anglais)new begging (Anglais>Latin)loppusaldo (Finnois>Anglais)research objectives (Anglais>Tagalog)sana magkita tayo isang araw (Tagalog>Anglais)pueri ambulant ad ludum (Latin>Anglais)je suis fier de toi (Français>Anglais)kaltstarteinrichtung (Allemand>Italien)owns (Anglais>Français)forhåbentlig (Danois>Italien)backbon video download (Hindi>Anglais)escalation (Anglais>Arabe)